နှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရမယ့် အင်္ဂလိပ်အသုံးဆန်းဆန်းလေးများ - For her Myanmar
အတည်ပေါက်နဲ့ နောက်ကြမယ်။ ဗြင်းခံရရင်တော့ အက်ဒ်မင်မပါ။ 😛
အက်ဒ်မင်ယောင်းတို့ကို အတတ်ကောင်းတွေသင်ပေးရဦးမယ်။ ယောင်းတို့ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း စနောက်၊ ဟာသတွေပြောလုပ်ဖြစ်ကြတယ်မလား။ ဒါဆိုရင် အရင်က နောက်ပြောင်ခဲ့တဲ့ ဟာသရိုးရိုးကြီးတွေကို ထားခဲ့လိုက်တော့။ နောက်တစ်ခါကျရင် အက်ဒ်မင်ဝေမျှပေးမယ့် ဟာသဆန်းဆန်းလေးတွေသုံးပြီး သူတို့ကို အူတူတူဖြစ်အောင် အရင်လုပ်။ ပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်ပြီး ထလုပ်ရင်တော့ အက်ဒ်မင်နဲ့ မဆိုင်ဘူးနော်။ 😛
ကဲ.. ကဲ.. အင်္ဂလိပ်လို စကြနောက်ကြမယ် ယောင်းတို့ရေ။ အက်ဒ်မင်ဝေမျှပေးမယ့် အင်္ဂလိပ်ဆိုရိုးလေးတွေ၊ အပြောလေးတွေ၊ ဟာသလေးတွေက တစ်ခါတည်း ကြားရုံ၊ ဖတ်ရရုံနဲ့ အဓိပ္ပါယ်တန်းမပေါက်လောက်ဘူး။ နောက်တစ်ခါလောက် သေချာပြန်စဉ်းစားတော့မှ နားလည်ပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်သွားမယ့် အသုံးလေးတွေ။ ဒီလိုပဲ ဥာဏ်ကောင်းရတာပေါ့လေ။ ကဲ.. သူများကို ချောက်ချဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလား။ ဟင်း … ဟင်း… (လူဆိုးမလှလှလေး ရယ်နည်းဖြင့် ရယ်ပါ။)
“Never look down on short people” တဲ့။
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ရင်ခွင်မီအရပ်ရှိတဲ့သူပါရင် သူ့ဘက်က ဒီလိုလေး ကာကွယ်ပြီး ပြောပေးလိုက်။ သဘောခွေ့သွားစေရမယ်။ ဟုတ်တယ်လေ… အဓိပ္ပါယ်ကလည်း “အရပ်ပုတဲ့ လူတွေကို အထင်မသေးပါနဲ့” ဆိုတော့။ သူ့ဘက်က ရပ်တည်ပေးတယ်ပေါ့။ အဲ… နောက်တစ်မျိုး စဉ်းစားလိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့….. “အရပ်ပုတဲ့ လူတွေကို အပေါ်စီးက မငုံ့ကြည့်ပါနဲ့ဟယ်။ သူတို့ခမျာ သနားစရာ” ဆိုတဲ့ ခနဲ့တဲ့တဲ့ လေသံလေးပါသွားရော။ နောက်မှ သူ့ဟာသူ ပြန်စဉ်းစားပြီး ဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေလိမ့်မယ်.. ဟိ။
(Look down ဆိုတဲ့ အသုံးကို နှစ်လုံးတွဲကြိယာအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အထင်သေးတယ် ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြီး၊ တစ်လုံးချင်းဆီ ဘာသာပြန်ရင်တော့ အောက်ကိုငုံ့ကြည့်သည်တဲ့။)
“Always remember you’re unique. Just like everyone else” တဲ့။
ဒါကတော့ အားပေးသလိုလိုနဲ့ ရိုက်ချတာပေါ့ကွယ်။ အဓိပ္ပါယ်က “မင်းဟာ ပြိုင်ဘက်ကင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ အမြဲသတိရပါ။ လူတိုင်း အဲ့လိုတွေးသလိုပေါ့။” စကားလုံး အကြီးကြီးတွေသုံးပြီး ပြောလိုက်တာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူအားလုံးကပဲ ပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့ လူတော်တွေလိုလို။ အဲ… နောက်တစ်ခါလောက် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ “လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြိုင်ဘက်ကင်းလို့ စဉ်းစားကြတဲ့အတွက် မင်းလည်း သူတို့နဲ့ ဘာမှမကွာတဲ့ အာပေတူး၊ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲပါပဲ” ဆိုတဲ့ သဘောရောက်သွားရော။ သူ့ဟာသူ ပြန်စဉ်းစားပြီးပေါက်ပါစေ။ လွှတ်ထားလိုက်.. အဟီး။
“Learn from your parents’ mistakes. Practice birth control.” တဲ့။
ဒါလေးကတော့ အိမ်ထောင်ရှင်မဖြစ်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို စလို့ရမယ့် အကွက်လေး။ သူတို့ ချစ်ချစ်နဲ့ အဆင်မပြေလို့ ရင်လာဖွင့်တာတွေ ဘာတွေဆို အဲ့ဒါလေးသာပြောလိုက်။ အာမခံတယ်… တွေ့ကရာနဲ့ ကောက်ပေါက်ခံရမှာ။ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်း အဓိပ္ပါယ်မပေါက်လောက်သေးတော့ ရှောင်တိမ်းချိန်ရှိတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က “နင့်မိဘတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး အတွေ့အကြုံမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှားကနေသင်ယူပါ။ ဥပမာ – ကလေးယူလိုက်မိတာမျိုးပေါ့။” အတည်ပေါက်နဲ့သာပြော။ စိတ်ချ ချက်ချင်းသဘောမပေါက်ဘူး။ နောက်မှ ထလုပ်မှာ။ ပြောချင်တာက သူ့မိဘတွေရဲ့ အမှားက သူ့ကိုမွေးလိုက်တာပေါ့လေ။ အဲ့ဒါ သမီးပြောတာဟုတ်ဘူးနော်။ 😛
“Anything is possible if you don’t know what you are talking about” တဲ့။
မဖြစ်နိုင်တဲ့ အရာဆိုတာ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးရှိတယ်မလား။ အဲ့တော့ အဲ့ဒါကို ခပ်တည်တည်နဲ့ပြော။ ပြီးတော့မှ “အဲ့စကားကို တကယ်ယုံနေတဲ့ လူအတွက်ပေါ့” ဆိုပြီးရိုက်ချ။ ပြောချင်တာက မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာ မရှိဘူးဆိုတဲ့ စကားက တလွဲကြီး၊ အဲ့ဒါကို ငတုံးမို့လို့ယုံတာ ဆိုတဲ့သဘော။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တာပဲ။ လက်တွေ့ဘဝမှာ အဲ့စကားက အမှားကြီးလေ.. နော်။
“You are like the cloud in my sky. When you go away, it’sabrighter day.”
ဒါလေးကတော့ ဘက်စကတ်ဘောပုတ်တာ။ မြှောက်ပြီးမှ ပြန်ရိုက်ချမယ်။ အဓိပ္ပါယ်က “နင်ဟာ ငါ့အတွက်တော့ မိုးကောင်းကင်ပေါ်က တိမ်တိုက်လေးပါ။ နင်လည်းမရှိတော့ရော နေရောင်လင်းချင်းပြီး သာယာလို့” ဆိုတဲ့သဘောပါ။ အစပိုင်းတော့ တိမ်တိုက်လေးနဲ့ နှိုင်းနေလို့ အဟုတ်ထင်နေမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တိမ်ဖုံးနေရင် နေမသာပဲ အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းကြီး ဖြစ်နေတယ်မလား။ ပြောချင်တာက နင့်ကိုမြင်ရတာ ကျက်သရေမရှိဘူးပေါ့။ ဟီး.. သမီးကစတာ။ 😛
အက်ဒ်မင် အပေါ်မှာပြောသွားတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေးတွေက သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းကြားမှာ ချစ်စနိုးနဲ့ စလို့ နောက်လို့ကောင်းမယ့် ဟာသဆန်းဆန်းလေးတွေပါ။ အင်္ဂလိပ်စာလည်း လေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲ… တစ်ခုရှိတာက ဒီဟာသလေးတွေကို မြန်မာလိုပြောပြီးစရင် အဓိပ္ပါယ်ပျောက်ပြီး အူလယ်လယ် ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အဲ့တော့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးပဲ စနော်။ တစ်ခါတလေလည်း ဦးနှောက်စားခိုင်းရမှာပေါ့.. ဟုတ်တယ်မလား။
ဒါလေးတွေသုံးပြီးစတဲ့အခါ နောက်ဆက်တွဲ ပါလာမယ့် ပစ္စည်းပျံလေးတွေကို ရှောင်န်ိုင်တိမ်းနိုင်ကြပါစေ။
Tags: English, Funny, Knowledge
Myat Moe November 24, 2017